LA OGAADAY: Lacagtii Sharadka Ahayd Ee Uu Sir Alex Ferguson Ku Lumiyay Cristiano Ronaldo Iyo Falcelintii Uu Sameeyay Oo Faah Faahsan. - Gool24.Net
LA OGAADAY: Lacagtii Sharadka Ahayd Ee Uu Sir Alex Ferguson Ku Lumiyay Cristiano Ronaldo Iyo Falcelintii Uu Sameeyay Oo Faah Faahsan.
Sir Alex Ferguson waxa uu ahaa tababarihii sababta u noqday in Cristiano Ronaldo uu kubbada cagta ka gaadhay heerka uu maanta ka joogo laakiin waxaa jiray waqti uu Ferguson sharad la galay xidiga reer Portugal.
Saddexdii xili ciyaareed ee ugu horeeyay ee uu Ronaldo ka tirsanaa kooxdii Sir Alex Ferguson ee Manchester United waxa uu ku jiray qaab ciyaareed aan joogto ahayn waxaana la arki jiray xiliyo uu Ronaldo mari jiray xaalado aad u adag oo uu cadho badan muujin jiray.
Saddexdii xili ciyaareed ee ugu horeeyay Old Trafford, waxa uu Ronaldo kooxdiisii United uu u dhaliyay 27 gool oo kaliya kadib markii uu ciyaaray 137 kulan waxayna taasi keentay in Sir Alex Ferguson uu sharad la galay Ronaldo si heerkiisa gool dhalinta sare ugu soo qaado.
Markii laga soo laabtay koobkii aduunkii 2006 kii waxa uu Cristiano Ronaldo soo laabtay isaga oo kalsooni badan soo helay wuxuuna galay heerkii uu sare u soo qaadi lahaa awoodiisa jidh ahaaneed iyo waliba gool dhalintiisa.
Laakiin xili ciyaareedkii 2006/2007 waxa uu Ferguson sharad la galay Ronaldo wuxuuna u sheegay in haddii uu xili ciyaareedka dhaliyo 15 gool oo Premier league ah in uu siin doono lacag dhan £400 pound.
Laakiin markii la marayay bishii December ee xili ciyaareedkaas waxa uu Cristiano Ronaldo dhaliyay 13 gool laakiin markii la soo gaadhay bishii February ee xili ciyaareedkaas waxa uu Ronaldo dhaliyay goolkiisii 15 aad kadib xasuuquu United ay White Hart Lane ugu gaysatay Tottenham.
Markii uu Ronaldo gaadhay tirada goolashii ay lacagta sharadka macalinkiisii Sir Alex Ferguson ku xidhnayd waxa uu dareenkiisa ku sheegay: “Garaacista tababaruhu waa hamigayga, waxaanan doonayaa in aan sii wado. Waxaan doonayaa in aan goolal badan dhaliyo” wuxuuna hadalkan sheegay kadib guushii 3-1 ka ahayd ee ay United ka gaadhay Aston Villa.
Laakiin Sir Alex Ferguson ayaa markii hore dood ka keenay tirada goolasha 15ka ahaa ee uu Ronaldo gaadhay bishii February ee xili ciyaareedkii 2006/07 kii wuxuuna ku dooday in goolasha rekoodhayaasha ahi ayna xisaab samayn balse waxa uu ugu danbayn ogolaaday in uu jeega lacagta u qoro Ronaldo.
Sir Alex Ferguson ayaa markaas yidhi: “Rekoodhayaashu ma tirsanaanayaan. Oh waa hagaag, waxaynu u baahanahay in aynu baanka tagno oo aan ka fikirno”.
Kadib waxa uu Sir Alex bilaabay in uu Ronaldo ku amaano sharadka uu kaga guulaystay wuxuuna yidhi “Wiilku wuu fiicnaaday, geesinimo ayuu ku ciyaarayaa oo uu markastaba kubbada doonayaa”.
Laakiin Sir Alex ayaa markaas Ronaldo ku eedeeyay in bilawgii kulankii Tottenham ee Man Uited uu ahaa mid aan wax badan danayn oo aan isku dhibin wuxuuna yidhi: “Waxaan filayaa in qaybtii hore ee ciyaarta uu ahaa mid ma daneeye ah, laakiin horumar ayuu sameeyay kubbadihii badnaa ee uu helay”.
Kadib waxaa Sir Alex Ferguson qasab ku noqotay in uu Ronaldo siiyay lacagtii 400 pound ahayd ee uu 15ka gool ee Premier league ugula galay.
Ronaldo waxa uu xili ciyaareedkaas ku dhamaystay 17 gool oo Premier League ah iyo 23 gool oo tartamada oo dhan ahaa waxaana halkaas ka bilawday waayihiisii ciyaareed ee layaabka lahaa.